Board lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Mazava fa ny birao lalao dia ireo izay azo nilalao teo amin'ny latabatra. Sokafy ilay efajoro ary namoaka ny ampihimamba, karatra, checkers na echec, backgammon na mahjong, sudoku, crosswords, Puzzles sy mahafinaritra hafa safidy. Tadidio anefa fa impiry no miatrika ny fahaverezan'ny singa iray tsy misy izay ny gameplay tsy misy dikany. Izao ianao safidy maimaim-poana amin'ny aterineto izay doza toy izany dia voailika, ary soso-kevitra isan-karazany ny olona aingam-panahy andalan-teny vaovao ny mahazatra lalao, fa aseho amin'ny thematic mahaliana akany.
Dinastika Mahjong Shanghai
Rummy tonta Classic
Fitadiavana Solitaire Piramida
Lalao Caps Soccer
Lalao Board lalao tamin'ny Category:
Farany Board lalao
Lalao birao bibilava sy tohatra
Mampifandray ny karatra
Tic tac rantsan-tongotra
League Caps Soccer
Lalao Online Rehetra Board lalao an-tserasera
Desktop Games ho an'ny fialam-boly sy ny fampandrosoana
Ary raha misy olona mahalala ny fomba voly ny tenany sy ny orinasa, dia ho malaza ary tsy mahatsiaro ho leo. Efa hatramin'ny taloha, nisy lalao izay mitondra ny olona iray miaraka amin'ny latabatra. Matetika izy ireo indrindra tonga amin'ny kisendrasendra ny olona izay Mankaleo ny inona na inona. Ary ny lalàna dia hamiratra, Mahafinaritra sy tena indray lazany.
Samy lalao iray dia mitaky fahalalana na ny lojika. Ny sasany singa ampiasaina amin'ny matematika, ny hafa dia mitaky fahalalana ao amin'ny faritra iray na maromaro ny siansa. Fa misy foana ny lalao fandaharana mba hahatsapa ny fientanentanana sy ny fanahy ny fifaninanana.
Misy ny lalao ho mahaleo tena lalao, manome ny hafa fa ny orinasa. Raha teo aloha ny antony ilaina ny fivoriana, lalao an-tserasera ny birao mamela anao hankafy ny dingana tsy misy faneriterena. Computer dika ny biraonao kilalao nanomboka ary voavonjy avy hatrany tamin'izany fotoana izany, mamela ny manaraka mba hanohy ny tapaka fivoriana.
Fisokajiana latabatra Lalao
Raha miresaka momba izany karazana ny fialam-boly, dia ilaina ho azy ireo mba hamaritana ny toetra. Fa biraonao-boly ahitana:
Thumbnail – lalamby, miaramila, Tanchiki
Ny fananana ny pilalaovana – checkers, chess, backgammon
Anjara asa, toy ny hoe "Mafia"
Noho ny fampiasana ny teny
manana lamina – ambin 'ny daomy, mahjong
Raha tiantsika hatrany ny lisitra izany afaka manohy, satria lalao ihany koa rehetra omena isan'ny mpilalao nanao kapoka, filokana sy ny ara-tsaina, fanabeazana, ary koa ny votoatin'ny (miaramila, ara-toekarena, hono).
no voafantina ao amin'ny birao Lalao toe-po
Tsara ny toy izany isan-karazany, izay mamela ny lalao birao lalao mifototra amin'ny toe-tsaina amin'izao fotoana izao. Raha toa ianao ka ao ny toetry ny fialam-boly sy hisaintsainana, tsara mahjong, izay ny fikarohana ny marina lalan'ny fampandrosoana mitovy philosophizing. Afaka mandeha Na izany na tsy tari-dalana, ary afa-tsy amin'ny fotoana dia ho lasa fomba mahomby mazava ny vahaolana. Na izany aza, ny fahaiza-mamerina ambaratonga izy ireo nefa nandresy mitaona hafanam-po.
Raha te-ho irery aminy? Solitaire, miovaova ny sarintany mba hahita mahomby mitambatra. Maps, dia efa foana ny raharaha, fa betsaka Miankina aminao. Ny mahagaga dia maro isa sy mandresy lahatra amin'ny tsotra sy sarotra io dikan-Sudoku. Mpankafy dia hahita hafa kanto Lalàn'i Mosesy ao amin'ny fanangonana ny Puzzles. Ireo tapa-baoritra kely nanafina ny sary hosodoko amin'ny mpanakanto samy hafa eras, natiora sary, mampihomehy biby fiompy sy ny bibidia ny biby kely mpiremby. Raha tsy matahotra ny olana, manangona Map fahiny, ranomasina nisamboaravoara sy endriky ny zavatra hita tamin'ny rotaka ny loko. Ny ankizy hahita ny mazava sary amin'ny litera avy amin'ny tantara an-tsary sy ny Comics.
Raha te-maromaro lalao, dia asao ny milalao ao amin'ny "adala", ny tetezana, ary ny arivo aterineto hafa dikan-namana na tamin'ny ordinatera Bot manatanteraka. Toy izany koa chess mahafinaritra sy checkers, ambin 'ny daomy sy backgammon. Dia hatao nahalala ny fitsipiky ny lalao tsy mahazatra, ny fanolorana ny fahalalana ny latabatra fialam-boly.
Ny foto-kevitry ny fiahiana sy ny birao lalao toy ny thimble, tenisy sy billiards. Dia nitsoka ny taratasy ny fanatanjahan-tena miaraka amin'ny mikasika ny fientanam-po. Ao amin'ny simulator ianao dia ho afaka hanitsy ny hery sy ny zoro ny fizotran'ny na hetsika. Indray, ny ankizy sy ny olon-dehibe no misafidy ny hanakatona ny safidy mba po ao amin'ny lalao lesona mahasoa. Izany dia hanohana ny faharanitan-tsaina amin'ny avo lenta, dia hanampy hanana, hampiditra vokatra vaovao amin'ny virtoaly biraonao kilalao izay azo mihazakazaka eo amin'ny ordinatera, ary eo amin'ny takelaka miaraka amin'ny finday avo lenta, ka izy ireo amin'ny tanana foana.